Inyathelo nenyathelo ngobugcisa bokwenza ekhaya -Ikkaro
yokuqalisa >> Imisebenzi yezandla
Ukwenza izinto ngezandla zethu kuyonwabisa ngokwenene. Yenza into engekhoyo. Ukukwazi ukuphinda usebenzise izinto esikholelwa ukuba akunamsebenzi kwaye ubone ukuba sizinika ubomi besibini.
Yenza imisebenzi yezandla kwaye uyenze ibe ntle. Kuyamangalisa oko.
Imisebenzi yezandla, i-DIY, indlela yokwenza, ukudibanisa ngaphandle kokuzahlula ngokucacileyo. Phantse nantoni na kwibhlog esinokuthi bubugcisa, kodwa kweli candelo sibandakanya amanqaku apho senza khona into
Indlela yokwenza ithanga leHalloween
Phezolo ndenze ngokungxama ithanga lam lokuqala le-halloween. Akunzima konke konke nangona kuye kwafuneka ndiyenze ebusuku kwaye andinazo izibane eziyimfuneko ukuthatha iifoto ezilungileyo. Ithanga oza kulibona lihlala lifana nangona ngamanye amaxesha libonakala liqaqambile iorenji kwaye ngamanye amaxesha linetoni eluhlaza ngakumbi.
Kulo nyaka ndithenge ithanga, njengoko bebeka iileyibhile Ezahlukeneyo: IHalloween, kulungile, ayisiniki lwazi lukhulu, ngesiqhelo kwinto endiyifundileyo (ukubona ukuba umntu angayiqinisekisa) bayayisebenzisa (ICucurbita Pepo, I-cucurbita exubekileyo, ICucurbita maxima, ICucurbita moschatayintoni i Amathanga aseMelika, abazisebenzisela zona IJack o lantern, lelo thanga leHalloween.
Uyenza njani iringi ngeepensile ezinemibala
Le yenye yezo ngqondi zincinci ngamanye amaxesha uzifumana kwiwebhu kwaye bayayenza imini yakho.
Ewe, siza kufunda indlela yokwenza isangqa esenziwe ekhaya seekhrayoni ezenziwe ngomthi, kwaye ijongeka inje, ipholile ngolu hlobo
Uyithande nyhani. Ewe, jonga ukuba yenziwe njani, ilula kakhulu. Nangona kwiifoto zesifundo basebenzisa i-lathe singayenza ngendlela yokwenza ekhaya nangona siza kutyala ixesha elininzi ngesixhobo esimalunga nemisebenzi emininzi, kwanezixhobo ezenziwa ngesandla.
Uyenza njani ikhava ngerabha ye-EVA ukuze uhlawulise iselfowuni yakho
Amaxesha amaninzi xa sibiza iselfowuni Asazi ukuba siyiyeke phi kwaye siphela siyiphumla phantsi, okanye ngaphezulu kwiradiyetha, kwitafile ekude apho intambo ishiywe ijinga nengozi yokuba nabani na odlulayo uyakuyiphosa kuthi.
Ndizakwenza into elula kakhulu ityala lokubamba i-smartphone kwitshaja ngokwayo ulibale ngezi ngxaki.
Kananjalo kungenziwa ngezikhongozeli zebhotile ezingenanto, ukwenza ibhasikithi encinci, kodwa iziphumo zibi kakhulu.
Phinda uhlaziye iinkonkxa zetyhuna
Inomdla kwaye ilula ubugcisa bokwenza nabantwana. Ku malunga ziphinde zisetyenziswe okanye zisetyenziswe kwakhona iinkonkxa zetyhuna ukufumana abaphathi bekhandlela okanye iimbiza zeentyatyambo. Siza kufumana iziphumo ezintle kwimizuzwana embalwa.
Ke masihle siye kwishishini.
Siza kudinga ezinye iinkonkxa esele zisetyenzisiwe kunye neephegi ezimbalwa zeempahla ezenziwe ngomthi. Ngezi zinto zomthi zintle kakhulu, kodwa ngombala weplastiki ethambileyo siya kufumana iziphumo ezilungileyo kakhulu ;-)
Indlela yokwenza amakhadi eKrisimesi enziwe ekhaya
IKrismesi iyeza !!! Lixesha lokuba siqale ukulungiselela iiprojekthi esifuna ukuzisebenzisa kwiiveki ezimbalwa. Kwaye… Qhubeka nokufunda
Indlela yokwenza uzive uMnu
Masizame ubugcisa obulula obuya kuba yinto yokudlala oyithandayo yabancinci endlwini. Ndiyazi … Qhubeka nokufunda
Ipeyinti kwikhadibhodi yeekomityi zeqanda
Ukusuka Inkunkuma Sibonise umsebenzi we U-Enno waseKroon
Uye wanika lo mkhwa igama I-eggcubism
Kude kube ngoku besiphinde sazisebenzisa iikomityi zamaqanda e-artón, kumagumbi angenasandi okanye izixhobo zomculo kunye nokudlala imidlalo. UMancala
Indlela yokwenza isithuthuthu ngezinto zokukhanyisa ezimbini
@irreductible indazisa nge-twitter malunga nale khokelo. Inyani yile yokuba ndicinga ukuba kufanelekile ukuyivelisa kwakhona kwaye ihleli ... Qhubeka nokufunda
Uyenza njani iibheji zemagneti
Ingaba uyayithanda iminqwazi yebhotile yotywala?
Kulungile masizenze imagnethi. Lo nto? Kuba uzibeke efrijini kwaye ukwazi ukuzibonisa, ngenxa Yenza umdlalo wamagnetic umzekelo abahloli kwaye ngokuqinisekileyo unokucinga ngezinye izinto ezingasetyenziswa.
Uyenza njani ibhodi emhlophe
Nonke niyazi ukuba a Ibhodi emhlophe.
Ezi bhodi zinokumakishwa okhethekileyo onokuzibhala kwaye uzicime amaxesha ngamaxesha njengoko ufuna.